Seces sampana Antananarivo: nanazava ny sain’ny mpinatra ny mpampianatra | NewsMada
Seces sampana Antananarivo: nanazava ny sain’ny mpinatra ny mpampianatra
Nihaona tamin’ny mpianatra ireo mpampianatra mpikambana ao amin’ny Seces, sampana Antananarivo, omaly. Niezaka nanazava ny sain’ny mpianatra izy ireo mikasika ny fampitsaharana fampianarana efa ho herinandro maromaro izao. Nitondrany fanazavana ny momba ireo fitakiana tsy mbola misy valiny ka antony tsy iverenana amin’ny fampianarana mihitsy aloha, hatreto.
Nohazavaina tamin’ny mpianatra, araka izany, fa efa intsivy ny fihaonanana natao tamin’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika hamahana ny olana misy, saingy hatramin’izao, tsy nisy ny marimaritra iraisana satria tsy misy vahaolana atolotr’ity minisitera mpiahy ity.
Etsy andaniny, mahatsiaro tena ho voa mafy ireo mpianatra satria very fotoana, tsy misy fampianarana mandeha eny amin’ny oniversite Ankatso amin’izao fotoana izao. Mitaky ny hiverenan’ny fampianarana ireto mpianatra ireto. Manamafy ny fitakian’ny Seces ihany koa anefa izy ireo ary manao antso amin’ny fanjakana hamahana ny olan’ny mpampianatra hahafahana miverina haingana amin’ny fampianarana.
Omaly ihany, nisy ny ampahany amin’ireo mpampianatra nihaona tamin’ny minisitry ny Fampianarana ambony nanaovana ny tatitra momba ny resaka nifanaovana tamin’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta, ny herinandro teo.
Hisy indray ny fivoriambe hotanterahin’ireo mpampianatra ireo rahampitso hanaovana ny tatitra momba ny dingana efa vita sy hanapahana ny mety ho tohin’ny fitakiana.
Marihina fa nanatanteraka hetsika fitakiana ihany koa ny oniversiten’i Toliara, ny talata teo, tamin’ny alalan’ny filaharana mihodidina ny “campus” izay nofaranana tamin’ny fanaovana “sit-in” teo anoloan’ny fiadidiana ny oniversite ary ny fametrahana sora-baventy.